बिदेशी कामदार बिना मलेसियाको बिकास सम्भव छैन ? - ramechhapkhabar.com
बिदेशी कामदार बिना मलेसियाको बिकास सम्भव छैन ?
कोभिड म’हामारी सुरु भएको २० महिनाभन्दा बढी भइसक्यो र अब, हामी अन्ततः राहतको सास फेर्न सक्छौं कम्पनी व्यवसायहरू फेरि एक पटक सञ्चालन भए पनि रोजगारदाताहरूले धेरै ठूलो स”मस्या सामना गर्दै छन् त्यो हो विदेशी कामदारहरूको अभाव।
मानव संसाधन मन्त्री दातुक सेरी एम. सरावनानले हालै मलेसियाले श्रम संकटलाई सम्बोधन गर्न सीमानाहरू खोल्ने निर्णय गरेपछि 32,000 भन्दा बढी विदेशी कामदारहरू वृक्षारोपण क्षेत्रमा आइपुगेको बताए। यो महिनाको अन्त्यसम्ममा प्रक्रिया पूरा हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
देशलाई अझै पनि निर्माण र वृक्षारोपण क्षेत्रमा विदेशी श्रमिकको सेवा चाहिन्छ तर अन्य क्षेत्रमा पनि धेरै महसुस भएको छ भन्ने कुरालाई हामी नकार्न सक्दैनौं।
म’हामारीका कारण धेरै पाँचतारे र बजेट होटल बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आएपछि सबैभन्दा ठूलो मा”र होटल उद्योगलगायतलाई परेको छ ।
उनीहरूका धेरै विदेशी कामदारहरू पनि आफ्नो गृहनगरमा फर्किएका थिए र आफूलाई टिकाउन अन्य कामहरू खोजिरहेका थिए। यसले गर्दा होटेल संघहरूले विदेशी कामदारहरूलाई काममा लैजानका लागि प्र”तिबन्धहरू खुकुलो पार्न सरकारसँग माग गरेका थिए।
होटल सञ्चालनमा धमाधम सुरु भएदेखि नै धेरै होटेल मालिकहरूले कम पारिश्रमिक र जागिरका लागि अयोग्य लगायतका विभिन्न कारणले स्थानीयलाई काममा लैजान समस्या भएको बताए ।
कोभिड म”हामारी ले धेरै मलेसियालीहरूलाई आफ्नो जागिर गुमा”एको छ र व्यापार क्षेत्र बिस्तारै पुन: प्राप्ति भईरहेको भए पनि, धेरैले अझै पनि कामका अवसरहरूको बारेमा छनौट गरिरहेका छन्।